Posted on January 21, 2018 January 19, 2018 by Salokya
Jan 2, 2014 मा पहिलो पटक प्रकाशित
2 thoughts on “महिलाले गर्ने हिंसाबाट पीडित पुरुष”
श्रीमतीको नाममा सम्पत्ति जोड्नेको समस्या यस्तै हुन्छ , श्रीमतीलाई बिश्वास गर्नु नै हुदैन त्यहि पनि विदेश बाट त झनै गर्नु हुदैन , विदेश बाट जति कमाउछ कि आफ्नै नाममा राख्नु होइन भने आमा बाबाको नाममा राख्नु अनि आवस्यक मात्र श्रीमतीलाई दिनु भए यस्तो समस्या ज्यान गए आउदैन !!! यत्रो सामाजिक संजालमा बिदेशमा रहेको श्रीमानको कमाइ लिएर श्रीमती फरार भन्ने खबर सुन्दा सुन्दा पनि विदेश बाट बिश्वाश गरेर सबै सम्पत्ति श्रीमतीको जिम्मा छोड्नु नै पुरुष हिंशाको मुख्य कारण हो !
ठिक्क खाए सब चिज मिठो
धेरै खाए गुण पनि तितो
त्यहि भएर सिमा नाघेर बिश्वास गर्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो !
अपवाद सबैतिर हुन्छ । त्यो अपबाद लाई चिनेर उस्को हारबाट छुट्याउन सके धेरै समस्याको समाधान पनि हुन्छ ।
क्लिनिकल साइकोलोजीस्ट ज्ञवालीजीको माथिको लेख निकै उच्च स्तरीय र चेतनामुलक छ । यस सन्दर्भमा मेरो राल्फ भन्ने एउटा साथिको याद आयो । केही बर्ष अघिसम्म उ र म संगै फ्रेसेनियस भन्ने एउटा कम्पनीमा SAP विज्ञको रूपमा काम गर्ने गर्दथ्यौं । त्यो कसर्नका विश्वभरीका सवै शाखाहरूमा आइपरेका समस्या हल गर्ने जिम्मा हाम्रो ग्रूपको थियो । त्यो काममा वेलाबखतमा समयको दवाव त हुन्थ्यो नै तर पनि उल्फट्याङ्ग कुरा गरेर हास्ने फुर्सद पनि काफि हुन्थ्यो ।
त्यो मेरो साथी राल्फ छुट्टीमा सधैं क्यानाडाको एकान्त ठाउतीर गएर क्याम्पीङ र हाइकीङ्ग गर्ने गर्छ । तेता भालु भेटिन्छ रे । सुरुसुरुमा उ भालु देखि डराउँथ्यो रे । तर कालान्तरमा एउटी भालुसंग उस्को घनिष्टता पनि बिकास भएछ । कुनै खानेकुरा खान दिएर सान्त भए पछि उ भालुलाइ सुम्सुम्याएर आनन्द लिन्थ्यो रे । भालु पनि घरेलु हुँछन् र सोझो मान्छे राम्ररी चिन्छन् रे ।
राल्फ अर्को सीजनमा जाँदा त त्यो भालुसंग त्यसका दुइटा बच्चा पनि संगै आउन थालेछन् । बच्चाहरू ले पनि उसलाइ चिनेझै गरेर उ संग खेल्थेरे |
पछि चाइ तीनीहरूबाट छुटकारा पाउन उस्लाइ धौ धौ परेछ I ती त पल्केर उस्को त्रीपाल छोडेरै नजाने रे के । उ छँदा भलादमी भएर बस्ने रे दिउसो निस्केको बेला उस्को खानेकुरा कहा लुकाएर राखेकेको छ त्यहीं बाट झिकेर खाइदिने रे । अन्त चर्न जानै छोडे रे
अन्तत उस्को खानेकुरा सकिन आँटेछ I अति भएपछि रिसाएर धपाउँछु यिनिहरुलाइ भनेर एस्सो हात उठाएको थियो रे बुढी भालुले त उस्लाइ समातेर बेस्करी लठ्ठीले हिर्काएर पिटिछ I ती बच्चाहरूलाई चाइ माया लागेछ छेक्न गएरे । दुखेको तोडले उ बेस्सरी कराएछ I उस्को भाग्यको कुरा हो कुन संयोगले त्यहां एउटा रेन्जर टुप्लुक आइपुगेर उसलाइ बचाए छ । रेन्जरलाइ देखेप६ी चाइ फेरी ती भालुहरु अचम्म संग भलादमी पाराले गए रे । त्यहाँको सिस्टम अनुसार त्यो रेन्जरले राल्फलाइ भालुको पिटाइ खाएको प्रमाणपत्र बनाइदिएछ ।
यस्तो हुन्छ प्रमाणपत्र भनेको देखिस भनेर गौरबका साथ देखाउँछ उ त । अझ मलाइ गिज्याएर तेरो पनि छ कि यस्तो, रे । मेरो पालो, छ मेरो पनि भनेर मेरो एउटा अरूलाइ नदेखाएको कागज देखाइ दिए । मेरी स्वास्नीले मलाइ पिटेर अति भएपछि पुलीस बोलाउँदा पुलिसले मलाइ त्यो कागज लेखेर दिएको थियो । त्यो देखेपछि राल्फ हाँसेन ।